ပိုင်တံခွန် နဲ့ ရေကူးကန်ထဲမှာ မနက်စာအတူစားခဲ့ကြတဲ့ ပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ “ဆွိဝတ်ရည်သောင်း” – Let Pan Daily
သီချင်းတွေကို သီဆိုရင်းနဲ့ ဂီတလောကမှာ ရပ်တည်နေသူ ကတော့ အဆိုတော်မလေး ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ ညီမချောလေးပဲ ဖြစ်ပြီး အစ်မလို သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ဝါသနာမပါဘဲ သီချင်းဆိုရတာကိုပဲ နှစ်သက်သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသံအေးအေးလေးကလည်း ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေကိုသာမကဘဲ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကိုပါ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်က ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ မနာလိုစေမယ့် ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မော်ဒိုက်သွားတုန်းက ပိုင်တံခွန် နဲ့ ရေကူးကန်ထဲမှာမနက်စာအတူစားခဲ့ကြတဲ့ ပုံလေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ” ကဲရော့! ကိုကြီးတံခွန်နဲ့ maldives ခရီးစဉ်အမှတ်တရ (အရှေ့တောင်အာရှက မမများမနာလိုဖြစ်ကြကုန် 😜 😜😜 ) ” ဆိုပြီး ရေးပြီး ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က အေးဝတ်ရည်သောင်း ၊ အိမ့်ချစ်၊ ပိုင်တံခွန်၊ ကျော်ထက်ဇော်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ အောင်မင်းခန့် အစရှိတဲ့အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှများနဲ့ မော်ဒိုက်ကမ်းခြေကို သွားရောက်လည်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမတင်ထားတဲ့ ပုံအောက်တွင်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ဆွိလေးကို စနောက်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်လို့ရအောင် ပိုင်တံခွန်နဲ့ဆွိဝတ်ရည်သောင်းတို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက် ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Source – Sweet Wutt Yi Thaung’s Facebook Account
သီခ်င္းေတြကို သီဆိုရင္းနဲ႔ ဂီတေလာကမွာ ရပ္တည္ေနသူ ကေတာ့ အဆိုေတာ္မေလး ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းရဲ႕ ညီမေခ်ာေလးပဲ ျဖစ္ၿပီး အစ္မလို သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္ကို ဝါသနာမပါဘဲ သီခ်င္းဆိုရတာကိုပဲ ႏွစ္သက္သူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အသံေအးေအးေလးကလည္း ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြကိုသာမကဘဲ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြကိုပါ ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္က ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္း ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြ မနာလိုေစမယ့္ ပုံေလးေတြ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေမာ္ဒိုက္သြားတုန္းက ပိုင္တံခြန္ နဲ႔ ေရကူးကန္ထဲမွာမနက္စာအတူစားခဲ့ၾကတဲ့ ပုံေလးေတြကိုထုတ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကလည္း ” ကဲေရာ့! ကိုႀကီးတံခြန္နဲ႔ maldives ခရီးစဥ္အမွတ္တရ (အေရွ႕ေတာင္အာရွက မမမ်ားမနာလိုျဖစ္ၾကကုန္ 😜 😜😜 ) ” ဆိုၿပီး ေရးၿပီး ပုံေလးေတြ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပုံေလးေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္က ေအးဝတ္ရည္ေသာင္း ၊ အိမ့္ခ်စ္၊ ပိုင္တံခြန္၊ ေက်ာ္ထက္ေဇာ္၊ ပိုင္ၿဖိဳးသု၊ ေအာင္မင္းခန႔္ အစရွိတဲ့အႏုပညာရွင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ားနဲ႔ ေမာ္ဒိုက္ကမ္းေျခကို သြားေရာက္လည္ခဲ့စဥ္က ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမတင္ထားတဲ့ ပုံေအာက္တြင္လည္း မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြက ဆြိေလးကို စေနာက္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြလည္း ၾကည့္လို႔ရေအာင္ ပိုင္တံခြန္နဲ႔ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းတို႔ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ ေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။